TO MEET the requirements of local farmers, about 20 Agribusiness Service Centres (ASCs)are planned to be established across the country by the Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO),its Director U Aung Win said.
Rice Factory to be opened in Kyaiklat
A value-added production factory of rice and rice products is slated to be opened on 2nd March by the Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) inabid to minimise the wastage from farms to mills.
MAPCO အနေဖြင့် ပြည်ပသို့ ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုမှ ဆန်တင်ပို့မှု၏ ရာခိုင်နှုန်း၆၀မှာ အာဖရိကဈေးကွက်ဖြစ်ပြီး တရုတ်ဈေးကွက်သို့ ဒုတိယအများဆုံးတင်ပို့
မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်(MAPCO)မှ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုမှ ဆန်တင်ပို့၏ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ မှာ အာဖရိကဈေးကွက်သို့ အများဆုံးတင်ပို့နေခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်ဈေးကွက်မှာ ဒုတိယအများဆုံးတင်ပို့နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် (MAPCO)အတွက် ကွန်တိန်နာ ပေ ၂၀ များတင်ရန် တွန်းသင်္ဘောနှင့် ကုန်တင်ရေယာဉ်တစ်စုံအား မြန်မာ့ကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါသဖြင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။